पहिलो त्रैमासमा नबिल बैंकको नाफा १ अर्ब ३ करोड
कात्तिक २९, काठमाडौंं । नबिल बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू.१ अर्ब ३ करोड खुद नाफा कमाएको छ ।
कम्पनीले शनिवार प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यो नाफा अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासभन्दा ७ दशमलव ८२ प्रतिशतले थोरै हो । अघिल्लो वर्ष उक्त कम्पनीले रू.१ अर्ब १२ करोड खुद नाफा कमाएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा पनि क्रमशः १७ दशमलव ६९ प्रतिशत र ७ दशमलव ६७ प्रतिशतले खुम्चिंदा खुद नाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । कम्पनीको वितरण योग्य नाफा भने ६२ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेकोे छ ।
प्रथम त्रैमासमा कम्पनीले रू.१ खर्ब ९६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी रू.१ खर्ब ५७ अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष रू.१ अर्ब ६० करोड रहेको संचालन मुनाफा घटेर यो वर्ष रू.१ अर्ब ४८ करोडमा सीमित भएको छ भने रू.१ अर्ब ९१ करोड रहेको खूद ब्याज आम्दानी पनि घटेर रू. १ अर्ब ५७ करोडमा सीमित बनेको छ ।
अघिल्लो वर्ष रू. ७४ करोड २२ लाख वितरण योग्य नाफा कमाएको कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बढाएर रू.१ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छ । कम्पनीले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी भने क्रमशः १३ दशमलव ३८ प्रतिशत र १६ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले बढाएको छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ९ करोड रहेको छ । सञ्चित कोषमा रू. १२ अर्ब ६१ करोड रहेके छ । पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.३ दशमलव ४८ ले घटेर रू.४१ दशमलव शून्य ३ मा झरेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.२६७ दशमलव शून्य ८ रहेको छ ।